WAR CUSUB: Feyraska Corona oo rajo fiican laga qabo daweyntiisa iyo ka hortagiisa | HalQaran.com
Home Caalamka WAR CUSUB: Feyraska Corona oo rajo fiican laga qabo daweyntiisa iyo ka...
WAR CUSUB: Feyraska Corona oo rajo fiican laga qabo daweyntiisa iyo ka hortagiisa
China (Halqaran.com) – Guo Yanhong oo katirsan maamulka mid kamid ah Isbitaallada ku yaalla Shiinaha kana tirsan Guddiga Caafimaadka ee Qaranka Shiinaha ayaa shir jaraa’id ku sheegtay in Feyraska Corona la daaweyn karo lagana hortagi karo.
Guo Yanhong ayaa sheegtay in Feyruskan markii uu billaabnayey uu hoos uga dhacay 18% taas oo u muuqata mid ka yar tiradii uu ku billowday oo aheyd 38%.
Hadalkan kasoo yeeray sarkaalkan ayaa ah mid rajo wanaagsan gelinaya dadka hadda wajahaya xannuunka, islamarkaana hoos u dhigaya cabsida laga qabo faafitaanka cudurkan.
Coronavirus ayaa markii ugu horreysay lagu arkay magaalo ku taalla dalka Shiinaha oo la yiraahdo Wuhan bishii December ee 2019, iyada oo uu wixii markaas kadambeeyay uu aad ugu faafay waddamada caalamka, tirada u geeriyootay ayaa ah ku dhowaad 2,000 oo ruux una badan muwaadiniinta dalka uu ka billowday ee Shiinaha.
Feyraska Corona oo laga daweynkaro
lagana hortagi karo